Ra'iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ka hadlay xariga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur [Dhageyso] | SAHAN ONLINE
Ra’iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo ka hadlay xariga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur [Dhageyso]
DUBAI – Ra’iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo waraysi siiyay Idaacada VOA ayaa cambaareeyey xariga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shalay maxkamad lasoo hortaagay.
Cumar Cabdirashiid Cali ayaa sheegay in dowladda aysan wax danbi ah ku hayn siyaasiga ay si sharci darro ah ku xirtay,wuxuu tilmaamay in eedeynta ah Qaran-dumis ay lamid tahay”Fatwooyinkii Al-Shabaabay ku xukumi jireen dadka ay doonayaan in ay ka takhalusaan”.
“…Qaran-Dumis iyo Khiyaano Qaran waxay lamid tahay Fatwooyinkii Al Shabaab, hadii Qaran dumis laga hadlayo Waxaa la dhiibay nin Askari muwaadin Soomaali ah oo dal kale loo dhiibay, Baarlamaanka ka hadlay oo aysan cidna dib danbe usoo hadal qaadin. In qof siyaasi ah oo dowlada dhaliilay in Qaran Dumis lagu sheego waa khalad..ayuu yiri
Waxa uu sheegay in madaxda dowladda ay hadda maxkamadaha iyo ciidamada u adeegsadaan mucaaridkooda si khaldan waa arrin halis ah.
Cumar oo beeniyey wararka sheegaya inuu taageersan yahay mooshin lagu ridayo xukuumada ayaa sheegay inuusan arrimahaasi hada ku jirin, isagoo sheegay in Madaxweynaha hada jooga uu isaga kamid ahaa murashaxiintii codkooda ku taageeray, balse micnaheeda aysan ahayn inay si indho la’aan ah dowlada ku taageeri doonaan.
Raysalwasaarihii hore ayaa ku baaqay in si deg degleh loo siidaayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur, wuxuu dhinaca kale walaac ka muujiyey caburinta lagu hayo Xildhibaanada Federaalka oo qaarkood Xeer illaalinta codsatay in xasaanada laga qaado si loo xirto.
“…Cubarintan Siyaasada ee ka socota dalka waa khasab inaan ka hadlo, sababtoo ah daadka iyo dulmiga gurigi hadii ay galaan guri kale kama leexdaan, waa in laga hortago si arrintan aysan usii faafin, dowlada waa inay illaaliso xaquuqda Dastuuriga ah oo uu leeyahay Muwaadinka…” ayuu yiri Cumar Cabdirashiid oo Tacsi u diray Ehelada askartii lagu dilay guriga CC Warsame.
“…Booliiska ayey ahayd inay hawshaan qabtaan, waana ka xumaya in askar dalka ka difaaci lahayd Al Shabaab lagu dilo weerarkaasi…” ayuu sii raaciyey isagoona sheegay in ciidamada loo adeegsaday weerarkan aysan hawshooda ahayn hawlahan.
Mar wax laga weydiiyey arrinta xiriirka uu la leeyahay Imaaraatiga iyo khilaafka u dhaxeeya dowlada Soomaaliya iyo wadankaasi, ayuu sheegay in dowlada Soomaaliya iyada laga rabo inay toos u abaarto oo ay ka hadasho oo aysan ku mashquulin shaqsiyaad Soomaali ah.
“…Dowlada Imaaraatiga waa mid xiriir dhaw laleh dadka Soomaaliyeed, waxaana ku yaal ganacsigeena ugu weyn sida Xawaaladaha, hadii dowladu ay wax ka tabaneyso waa inay si toos ah u abaarto…” ayuu yiri Raysalwasaarihii hore ee Soomaaliya.
Senator Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in dowladihii hore ay soo diyaariyeen arrimihii ugu muhiimsanaa sida Dhismaha maamul gobaleedyada, waxa laga rabay dowlada hada jirta ay tahay dhameystirka Dastuurka iyo diyaarinta xisbiyada & Doorashooyinka, balse sanadkii lasoo dhaafay xukuumada hada joogta waxay ku mashquushay oo kaliya faafin been oo Social Media la mariyo, arrintaasina wakhtiga ku dhamayo dib u dhacna waxay ku keenaysaa dalka.
Hoos ka dhageyso Waraysiga Cumar Cabdirashiid